जिल्ला सभापतिको भेला गर्ने कांग्रेसकाे निर्णय - नेपालबहस
जिल्ला सभापतिको भेला गर्ने कांग्रेसकाे निर्णय
| १४:१५:३७ मा प्रकाशित
२ फागुन, काठामाडौं । नेपाली कांग्रेसले निर्धारित समयमा १४ औं महाधिवेशन गर्न नसक्ने लगभग निश्चित छ । तर अर्काे कार्यतालिका बनाउन भने कसैले चासो दिएका छैनन् । यही फागुनको १९ गतेबाट वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । गएको वर्ष नै कार्यकाल पूरा भएपनि कार्यसमितिले निर्णय गरेर फागुनसम्म म्याद थप गरेको थियो ।
फागुन ७ देखि १० गतेसम्मका लागि महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरिएको भएपनि अहिलेसम्म नयाँ मिति घोषणा भएको छैन । संस्थापन इतर पक्षले समेत त्यसमा चासो देखाएको छैन । तर सभापति शेरबहादुर देउवाले अब संवैधानिक प्रावधानलाई कोट गरेर कार्यसमितिको कार्यकाल ६ महिना थप्न लागेको जानकारी इतर पक्षले पाएपछि सल्बलाएको छ ।
स्रोतका अनुसार सभापति देउवाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर कार्यकाल थपिएको जानकारी दिन लागेपछि इतर पक्ष झस्किएको हो । यसका लागि कार्यसमिति बैठक बोलाइनुपर्ने उनीहरुको माग छ । तर देउवा भने अहिले कार्यसमिति बोलाएर झमेलामा उल्झिने पक्षमा छैनन् । त्यसैले विज्ञप्तिमार्फत कार्यकाल थप भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पठाउन लागिएको स्रोतको दाबी छ ।
संस्थापन पक्षले फेरि बलजफ्ती गर्न लागेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले आज बिहान महामन्त्री डा. शशांक कोइराला निवासमा आफूपक्षीय नेताहरुको भेला बोलाई देशैभरिका जिल्ला सभापतिहरुको भेला गराई दबाब दिने निर्णय गरेको छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समेतको उपस्थितिमा भएको भेलाले फागुन ५ गते काठमाडौंमा जिल्ला सभापतिहरुको भेला डाकी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक डाक्न दबाब दिने निर्णय भएको हो । त्यसपछि मात्रै नयाँ महाधिवेशनको मिति सुनिश्चित हुनेछ । नत्र कार्यकाल थपिने तर नयाँ कार्यतालिका भने नआउने अवस्था निर्माण गर्न लागिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले आपत्ति जनाएको छ ।
दुई वर्षपछि पुन सञ्चालनमा जामाखोला जलविद्युत् आयोजना ५ दिन पहिले
शनिबार गण्डकीका पाँच जिल्लामा विद्युत सेवा बन्द हुने १ दिन पहिले
विप्लवले पनि गठन गर्यो प्रवक्ता प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टाेली ४ दिन पहिले
दुईवटा ट्रक एकापसमा ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु ४ दिन पहिले
‘रेमिट्यान्स दुरुपयोग’ले बढाउँदै सम्बन्धविच्छेद ३ दिन पहिले
साहित्यकार नर्मदेश्वरीको ‘यात्राका तरङ्ग’ सार्वजनिक १ दिन पहिले
बङ्लादेशमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा दर्जनौ घाइते ६ दिन पहिले
नेप्सेमा आरएमडीसी लघुवित्तको १५ प्रतिशत बोनस शेयर सूचिकृत ४ हप्ता पहिले
देवरको ज्यान जोगाउन पसलपसल ५ दिन पहिले
लकडाउनले विकास निर्माण ठप्प, सडक चिटिक्क ! ११ महिना पहिले
दक्षिण कोरियाको कार निर्यातमा वृद्धि ४ महिना पहिले
चीनले इजिप्ट र अरब लिगलाई कोरोनाकाे खोप उपलब्ध गराउने ४ हप्ता पहिले
गोदावरीमा फलफूल र औषधिजन्य वृक्षरोपण गरिने ९ महिना पहिले